Wadfi xidlhibaanno ah oo ka socda Galmudug oo booqday xarunta Golaha Shacabka – Kalfadhi
Guddomiye ku-xigeenadda kowaad iyo labaad ee Baarlamaanka Galmudug iyo xildhibaanno ka tirsan maamulkaasi, ayaa shalay booqday xarunta Golaha shacabka, halkaasi oo ay kula kulmeen xildhibaanno ka tirsan golaha shacabka.
Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee Golaha Shacabka Mudane Mahad Cabdalla Cawad, oo soo dhoweeyay wafdiga ayaa xubnaha kusoo wareejiyay xarunta Baarlamaanka ee magaalada Mogadishu.
Dhinaca, Guddomiye ku xigeenka kowaad ee Baarlamaanka Galmudug mudane Cabdullahi Xirsi Maxamed, ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsanyihiin soo dhoweyntii loogu sameeyay xarunta Baarlamaanka ee Soomaaliya.
Baarlamaanka labaad ee Galmudug ayaa ku jiray dhismo, waxaana dhawaan ay bilaabeen shaqooyinkooda iyo shirarka caadiga ah ee Baarlamaanka, iyadoo dhawaan la sheegay in la dhisi doono xarunta Baarlamaanka ee maamulkaasi.
Sidoo kale todobaadyada soo socday ayaa lagu wadaa in magaalada Dhuusamareeb ay ka dhacdo munaasabada lagu caleema-saarayo madaxweynaha cusub ee maamulka Galmudug.